एपीएफ स्कुल कपमा पुष्पसदन र ल्याब स्कुल विजयी
आजको न्युज आईतबार, माघ २६, २०७६, ११:१७:००
काठमाडौं । नेपाल एपीफ स्कुल कीर्तिपुरको आयोजनामा भइरहेको छैठौँ नेपाल एपीफए स्कुल कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार ४ खेल भएका छन् ।
शनिबार भएको पहिलो खेलमा पुष्पसदन बोर्डिङ हाइस्कुलले राराहिल मेमोरियल स्कुललाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ । पुष्पसदनलाई विजयी गराउन नर्बु तामाङले २ गोल गरे भने राराहिल मेमोरियल स्कुलको तर्फबाट नगेन्द्र विष्टले १ गोल फर्काएका थिए ।
त्यसैगरी दोस्रो खेलमा ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसनले एम्ब्रोसिया इन्टरनेसनल स्कुललाई ४–० को फराकिलो गोलअन्तरले पराजित गर्‍यो । ग्रिन भिलेजका तर्फबाट सरुण कुँवरले ३ गोल र समीर बोहराले १ गोल गर्दै टिमलाई विजयी गराए ।
शनिबार नै भएको तेस्रो खेलमा हारती शिक्षा मन्दिरले बाघभैरव बोर्डिङ स्कुललाई २–० गोलको अन्तरले पराजित गर्‍यो । हारतीको तर्फबाट सागर लामा १ र मनिष रमौली मगरले १ गोल गरेका थिए ।
त्यसैगरी अन्तिम खेलमा ल्याबोटरी मा.वि.ले न्यु भिजन एकेडेमीलाई ५–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्‍यो । ल्याबोटरी मा.वि. लाई विजयी गराउन रमेश के.सी. २, सुवर्ण प्रधान १, ऋतिक पढेरा १ र रविन तामाङले १ गोल गरेका थिए ।
त्यसैगरी आइतबार पनि लिग चरणका द्ध खेल हुने नेपाल एपीएफ स्कुलको खेलकुद संयोजक राजकुमार प्याकुरेलले जानकारी दिए । प्याकुरेलका अनुसार आइतबार आयोजक नेपाल एपीएफ स्कुल र हारती शिक्षा मन्दिरबीच पहिलो खेल हुने छ भने दोस्रो खेलमा लिटल एन्जल्स स्कुल र लोयल्टी एकेडेमीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।
यसैगरी साल्भिनिया एकेडेमी र नेपाल पुलिस स्कुलबीच खेल हुने छ भने अन्तिम खेलमा ब्राइट होराइजन चिल्ड्रेन होम स्कुल र जनसेवा मा.वि. भिड्ने छन् ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ २६, २०७६, ११:१७:००